Itoobiya: ONLF Oo Laga Saarayo Liiska Argigixisada Iyo Cafis Guud Oo La Fidinayo – Goobjoog News
Warar lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in maanta ay golaha wasiirrda ee Itoobiya gudbiyeen qaraar ururka ONLF looga saarayo liiska kooxaha argigxisada ah iyo in cafis loo fidiyo kooxo iyo shakhsiyaad horay loogu tuhmay khiyaanno qaran.
Fitsuma Arega oo ah agaasimaha xafiiska ra’isul wasaaraha ayaa bartiisa ku qoray in golaha wasiirrada Itoobiya ay u gudbiyeen baarlamaanka dalkaasi qaraar ONLF iyo kooxo kale looga saarayo liiska argigixisada.
Uruurada la qaadayo xayiraadda waxaa ka mid ah OLF, ONLF & Ginbot 7, waxaana la sheegayaa in arrintan ay dhiirigelin-doonto xuriyadda dadka iyo inay si nabad ah loo gaari karo hadaf siyaasadeed.
Waxyaabaha baarlamaanka loo diray waxaa kale oo ka mid ah: in la cafiyo shakhsiyaad iyo hey’ado horay loo dhahay waa “Khaa’imiin” kuwaas oo lagu helay ama baaritaan ku socdaan ama xataa dambiyo kale oo dowladda ka dhan ah sida kooxaha hubeysan.
September 6, 2017: Dowladda Soomaaliya oo Itoobiya u dhiibtay Cabdikarim Qalbi-dhagax ayaa maalintaas sheegtay inuu ka tirsanaa koox argigixiso ah.
Ku darista Xukuumadda Soomaaliya ay ku dartay ONLF ku dartay liiska kooxahaasi, waxaa ay dhalisay muran badan, lamana oga waxaa ay sameyn-doonta kadib go’aanka xukuumadda Itoobiya ee ururkaasi uga saartay liiska kooxaha argigixisada.
Xeer Ilaalinta Guud Ee Puntland Oo Amartay In la Soo Qabto Xisaabiyihii Hore Ee Mudug